ओलीको शक्ति प्रदर्शन : ‘खोई भत्ता र मासुभात, खाली चिसो भुइँ !’ « Ok Janata Newsportal
ओलीको शक्ति प्रदर्शन : ‘खोई भत्ता र मासुभात, खाली चिसो भुइँ !’
काठमाडौं । नेकपा ओली पक्षले काठमाडौंको नारायणहिटी अगाडि शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार ओली पक्षले एक लाख मानिस उतारेर आफ्नो पक्षमा जनमास देखायो । त्यहाँ बोल्ने वक्ताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा थिए । बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरु उत्साहित देखिन्थे ।
प्रचण्डसँगै सशस्त्रद्वन्द्व लडेका गृहमन्त्री थापाको उत्साह सभामा निकै देखिन्थ्यो । उनले यतिसम्मकी केही समयअघि नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्तिप्रति इंगित गर्दै उनलाई जावलाखेलको जूमा लगेर थुन्छु सम्म भन्न भ्याए । प्रचण्डले शाकाहारी आन्दोलनले प्रतिगमन नडगमगाउने र मांसाहारी आन्दोलनका लागि तयार हुन नेता कार्यकर्तालाई भनेका थिए ।
ओली पक्षका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मांसाहारी भनेको ‘चिकेन चिल्ली हो ?’ भन्न भ्याए । ओलीले जनमास देखेर उत्साहित हुँदै आफ्नो पक्षमा लाखौँ जनता भएको भन्दै आधिकारिकता सडकबाटै दाबी गरे । उनले भने, ‘खास नेकपा को रहेछ यो मासले प्रमाणित गरेको छ ।’
कार्यक्रमस्थलमा एक फरक दृष्य देखियो, प्रधानमन्त्री ओलीले अत्याधिक चिसोका कारण आँशु आएको भन्दै पुछे तर उनका कार्यकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री रोएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याए ।
आखिर किन रुनु थियो र ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो सभामा । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ओली रोएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याए ।
केही समय अगाडि देखि प्रधानमन्त्री ओलीले माघ २३ गते हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्छन् भन्ने हल्ला फैलाइएको थियो । तर, त्यो विषय अपुष्ट थियो । हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्ने माग राख्दै आएका विभिन्न दलका कार्यकर्ता पनि सभामा देखिए तर, प्रधानमन्त्री ओलीले निकै दुःखका साथ आर्जेको व्यवस्थालाई धरासायी पार्न नसकिने र लोकतन्त्रलाई नै संस्थागत गर्नुपर्ने बताएपछि उनीहरु चिल्लै भएर फर्किए ।
सभामा एक अर्को दृष्य देखियो, एक महिलाले एकहजार रुपैयाँ र खानबस्न पाइयो यो भन्दा बढी के चाहियो ? भन्दै गरेको दृष्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
यतिसम्मकी जनतालाई पशुपतिको दर्शन गराउने र घुमाउने भन्दै काठमाडौं ल्याइएको रहेछ । तर, उनीहरुलाई चिसो भुइँमा राखेर भाषण सुनाइयो ।